कहिले बज्ला बिहेको बाजा ? « Ramailo छ
कहिले बज्ला बिहेको बाजा ?
मंसिर, लगनको महिना हो । लगनको महिना पारेर हामीले केही अविवाहित प्रेम जोडी र सिङगल सेलिव्रेटी बारे छोटो चर्चा गरेका छौं । कहिले बज्ला त बिहेको बाजा ?
प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराजको जोडी फिल्म वृत्तको चर्चित प्रेम जोडी हो । केही समयदेखि प्रेममा रहेका प्रियंका र आयुष्मानले बिहे गर्ने बताउँदै आएपनि मिति भने तोकेका छैनन् । उनीहरु एक अर्काको परिवारसँग परिचित छन् । नम्रता श्रेष्ठ र दावा स्टेभन शेर्पा ओपन रिलेशनसिपमा रहेपनि बिहे बारे केही पनि बोलेका छैनन् । सम्भवतः उनीहरु आफ्नो बिहे हुन सक्नेमा ढुक्क छैनन् । त्यसैले मौन छन् ।
बर्षा राउत र संजोग कोईराको जोडीलाई उदाहरणिय जोडीको रुपमा हेरिन्छ । उनीहरु आफ्नो प्रेम र बिहे बारे मिडियामा खुलेर कुरा गर्दछन् । उनीहरु सम्भवतः छिट्टै बिहे गर्नेछन् । तर यही साल भने उनीहरुको बिहे नहुन सक्छ । कारण, संजोग व्यावसाय र बर्षा फिल्ममा व्यस्त छिन् ।
गहिरो प्रेममा रहेका सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठ पनि बिहे गर्ने मनस्थितिमाा छन् । सौगात चाँडो बिहे गर्ने सोचमा छन् । तर सृष्टि करिअर लाई अगाडी बढाएर बिहे पछि गर्ने सोचमा छिन् ।
संयम पुरी र आश्मा डिसी रजतपटका ‘क्युट कपल’ हुन् । उनीहरुको प्रेम बारे परिवार पनि जानकार छ । नायिका पूजा शर्मा, साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह पनि रिलेसनसिपमा छन् । तर उनीहरु ओपन छैनन् । त्यसैले बिहे कहिले गर्छन् पत्तो छैनन् ।
जो एकल छन्
निर्माता छविराज ओझा सँगको सम्बन्ध बिच्छेद पछि नायिका रेखा थापा एकल छिन् । यस्तै नायिका श्वेता खड्का, ऋचा शर्मा, केकी अधिकारी, नम्रता सापकोटा, रजनी केसी, दीपिका प्रसाईं लगायत दर्जन बढी नायिकाहरु एकल छन् । उनीहरुको बिहेको बाजा कहिले बज्ला त ?